Marcelo oo maanta dib ugu soo laabtay tababarka Kooxdiisa Real Madrid… (Miyuu ciyaari doonaa kulanka Real Valladolid?) - Hargeele - Wararka Somali State
(Madrid) 28 Sebt 2020. Real Madrid ayaa dib ugu soo laabatay Tababarkeeda caadiga ah maanta oo Isniin ah, kaasoo ay isugu diyaarinayaan kulanka ay Arbacada wajahayaan naadiga Real Madrid, waxaana Marcelo uu awood u yeeshay inuu tababarkan la dhammaysto kooxda inteeda kale isagoo aan dareemeynin wax dhibaato ah.
Daafaca bidix ee reer Brazil ayaa ka maqnaa kooxda kulankii Sabtidii ay 3-2 uga adkaadeen Real Betis, kaddib markii shaxda kooxda loogs aaray dhibaato dhanka dhabarka ah daqiiqaddii ugu dambeysay.
Warka kale ee farxadda leh oo uu helay Tababare Zinedine Zidane ayaa ah in Marco Asensio, Eden Hazard iyo Lucas Vazquez ay awood u yeesheen inay markale tababar laqaataan xiddigaha ay isku kooxda yihiin.
Sidan oo kale, qaar iyaga ka mid ah ayaa xilli ciyaareedkoodii ugu horreeyay ku ciyaari kara garoonka Estadio Jose Zorrilla.
Kaliya xiddigaha ka maqan Los Blancos ayaa ah Eder Militao, Mariano Diaz iyo Toni Kroos.
Militao iyo Kroos ayaa kasoo kabsanaya dhaawacyo muruqa ah, halka Mariano uu soo kabanayo qalliin looga sameeyey qumanka.